Aqoonkaab DHIIG KARKA (Hypertension) | Aqoonkaab
Dec 10, 2018Caafimaadka
Qofkasta oo qaangaadh ah waa inuu cabiraa cadaadiska dhiigiisa shanti sanoba hal mar, balse hadii cadaadiska dhiigu yahay 140/90 mmHg waa inaad cabirtaa ugu yaraan
sanadkiiba hal mar.
SIDO LOO CABIRAA DHIIG KARKA?
• Lambarka kore waa midka sare waxaana loo yaqaannaa “systolic”. Waa cadaadiska ku jira xididada dhiigga marka uu wadnaha dhiiggu ku shubmo.
• Lambarka hoose waa midka hoose waxaana loo yaqaannaa “diastolic”. Waa cadaadiska ku jira xididada dhiigga marka uu wadnuhu nasanayo inta u dhexeysa garaacyada.
CADAADISKA DHIIGA EE CAADIGA AH :
Da’da way saamaysaa cadaadiska, oo wax yar ayuu ka korreeyaa akhrinta kor ku xusan mar walbuu qofka da’diisa kororto, waana dabiici.
CADAADIS-KA DHIIGA OO SARREYA:
Mar kastoo ay dhiigga ku adkaato inuu ku qul-qulo marinnada dhiiggaaga, lambarrada cadaadiska dhiiggu kor ayey u sii kacayaan. Marka uu jiro cadaadis dhiig oo sarreeya, wadnahaagu si xoogan ayuu u shaqaynayaa
Dadka qaba xanuunka macaanku way u dhaga nugul yihiin in cadaadiska dhiigoodu sare ukaca (Dhiigkar).
 Hiddo:- hadii qoyskaagu uu lahaa dhiig kar waxa sahlan in uu adigana ku asiibo.
 Da’da:- markasta oo da’du sii waynaato waxa koraya jaaniska dhiig karku kugu dhici karo.
 Milixda badan:- Cunto milixdu ku badantahay hadaad cunto waxa siyaadaya fursada uu kugu dhici karo dhiigkar.
 Khamriga:- khamrigu waa hooyada cudurada, waxaanu sababaa boqolaal xanuun oo uu ka mid yahay dhiig kar.
 Miisaankaaga oo culus:- buurnida iyo cayilku waxay sababaan xanuuno badan.
 Qoomiyadaha:- qoomiyadaha qaar ayaa u dhago nugul ina uu asiibo dhiig karku sida qoomiyada Afikan amerikanka, sababtana lama garanayo.
 Maadooyinka qaar oo yar:- sida macdanta potassium, magnesium iyo calcium.
 Jimicsi la’aan:- fadhiga iyo jimicsi la’aantu waxay keenaan carqalado badan.
 Hurdada oo neeftu kugu qabato:- xilliga hurdada oo hawo mareenku uu daboolmo.
 Daawooyinka:- daawooyinka lagu dajiyo kaarka iyo xummada waxay keenan dhiig kar sida naproxen,motrin iyo celebrex.
GOORMA AYAA LA XIDHIIDH DHAKTARKA?
• Hadii cadaadiska dhiigaagu uu ka badanyahay 180/110 mmHg.
• Hadii aad u malayso in dhiig karku kugu sababay calaamadahan; madax xanuun daran, aragtida oo ku daciifta, lalabo iyo matag.
• Waxa haboon inaad la xidhiidho dhakhtarka.
• Hadii cadaadiska dhiigu yahay 140/90 ama ka sareeyo.
• Hadii aad istidhaahdo dhiig karku saamayan ayuu kugu keenay.
SIDAAN UGA HORTAGAA DHIIG KARKA ?
• Sigaarka jooji.
• Miisaanka dhin hadii uu saa’id yahay.
• Cunto fiican cun oo isu dheelitiran.
• Jimicsi samee, sida orodka, dabaasha ama baaskiilka.
• Khamriga iyo daroogada ha u dhowaan.
SUAALO MUHIIM AH IN AAD WAYDIISO DHATARKAAGA:-
1. Halkuu marayaa cabirka cadaadiska dhiigu?
2. Waa maxay cadaadiska dhiiga ee loo baahanyahay in la gaadho?
3. Labada cadaadis (ka sare iyo ka hooose) keebaa kacsan?
4. Ma jiraa wax saamaynaya dhiig karka sida khamriga, sigaarka, cuntada, miisaanka jidhka iyo jimcsiga?
5. Waa maxay dawada dhiig kara iyo sida ay ii saamaynayso?
6. Dawadu miyey igu keenaysaa xanuuno kale?
7. Xillima Ayaan qaataa dawada? Sideebaan u qaataa dawada`?
8. Ma jiraa dawooyin aan iska ilaalinayo?
 Nolosha ood wax ka badasho.
 Daawayn joogta ah.
• Miisaankaaga dhin:- hadii aad buurantahay ood dhinto miisaankaaga dhiigkarkuna hoos ayuu u dhacayaa.
• Jimicsi samee:- waa inaad samayso jimicsi sida orodka, dabaasha iyo baaskiilka.
• Jooji sigaarka:- nikatiinta ku jirta sigaara waxay kicisaa dhiig karka iyo garaaca wadnaha.
• Khamriga ha udhowaan:- khamrigu waa hoyga iyo hooyada cudurada.
• Cun cuntooyin fiican:- qorshee cuntadaada isuna dheeli tir.
1. Diuretics:- waxay leedahay noocyo badan sida Thiazide, Loop, Potassium-sparing iyo Quinazoline. Dawadan waxay sababtaa in kalyuhu sii daayaan milix badan iyo biyo, tasoo caawinaysa in gidaarka xididadu waynaado oo ay nastaan.
2. ACE inhibitors:- Daawadani waxay xakamaysaa hormoono cidhiidhiya gidaarka xidididada, tasoo sahasha in dhiig karku hoos u dhaco.
3. Angiotensin II receptor blockers (ARBs):- waxay xakamaysaa shaqada hormoonada cidhiidhiya gidaarka xididada.
4. Beta-blockers:- waxay yaraysaa garaaca wadnaha iyo dhiiga kasoo burqada wadnaha.waxaana inta badana loo qoraa dadka wadno xanuunka leh.
5. Calcium channel blockers:- waxay sababtaa in gidaarada xididadu waynaadaan, dhiiguna si sahlan u socdo.
6. Direct renin inhibitors:- waxay xakamaysaa shaqada hormoonada dhiig karka.
Diyaariye :Mustafe Saleebaan Xasan
Previous PostLiin Dhanaanta Next PostDhan-qalal / Faalig (Stroke) - Cudur Halis Ah